နိုင်ငံမဲ့ဘဝမှ ကမ္ဘာကျော် Oracle ကုမ္ပဏီရဲ့ ဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်လာသူ မြန်မာပြည်ဖွားတစ်ဦး – Aung Par Say
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အာရှနည်းပညာတက္ကသိုလ် Asian Institute of Technology- AIT ၌ ၁၂၄ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကျင်းပသည်။ထိုဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် ဘွဲ့ရယူဆွတ်ခူးခဲ့သူများမှာ
ဗီယက်နမ်မှကျောင်းသား ၈၀ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသား ၃၃ ဦး၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ နီပေါ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား ၂၈ ဦး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှကျောင်းသား ၁ ဦး တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုအခမ်းအနားတွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား စီစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ Prof. S. Kumar က အဖွင့်အမှာစကား အနည်းငယ်ပြောကြားပြီးနောက် ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအတွက် သြဝါဒစကားချီးမြှင့်ပေးမည့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကို အချိန်ယူ၍ မိတ်ဆက်ပြောပြခဲ့သည်။ ထိုသူမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ AIT တက္ကသိုလ်၏ အထူးချွန်ဆုံးဘွဲ့ရ ကျောင်းသားများကိုယ်စား စကားပြောကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်၊
၁၂၄ ကြိမ်မြောက် AIT ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား၌ ဂုဏ်ထူးဆောင်သြဝါဒရှင် အဖြစ် ပြန်လည်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသော ဒေါက်တာ ရာဖီအုလ် အဟဒ် Dr. Rafiul Ahad ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာ အဟဒ်သည် အမေရိကန်မှကမ္ဘာကျော် Oracle Corporation ၏ Product Development ၌ ဒုတိယ အကြီးအကဲအဖြစ် ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ဒေါက်တာအဟဒ်က မိမိ၏ဘဝအကြောင်း တစွန်းတစကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ၃၈ နှစ်က သူသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ စွန့်ခွာထွက်ရှိလာပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ “နိုင်ငံမဲ့” ဘဝဖြင့် ရောက်လာသည်။ (ဇာတိနိုင်ငံ၏အမည်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိခဲ့)။ ရရှိထားသောဘွဲ့နှင့် ကိုက်ညီဆီလျော်သည့်အလုပ်အကိုင် မရရှိသောကြောင့် ဘုရားကျောင်းများ၏ နံရံနှင့် ကြမ်းခင်းများကို ဆေးသုတ်ခြင်း ၊ လုံခြုံရေး အချက်ပေး ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြင်း စသည့်အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းနောက် ဘုရားကျောင်း၏သင်းအုပ်ဆရာက သူ၏ပညာခရီး ရှေ့ဆက်ရေးအတွက် AIT တက်ခွင့်ရအောင် ကူညီပေးသည်။ ထိုင်းဘုရင်၏ ပညာသင်ဆုကို ရရှိ၍ M.Sc. (Computer Applications) ဘွဲ့လွန်ကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။
ထိုမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံပညာသင်ဆုဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒေါက်တာဘွဲ့အား ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုးအခြေအနေတွင် မိမိကို မြေတောင် မြှောက်တွန်း တင်ပေးလိုက်သောထိုင်းနိုင်ငံအား ကျေးဇူးဆပ် အလုပ်အကျွေးပြုရန် အစဉ်သဖြင့် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း စသဖြင့် သူက ရှည်လျားစွာ ပြောဆိုမှာကြားသည်။ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိရန်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌မဆို
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဆောင်ရွက်တတ်ရန်၊ အသိပညာများကို မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးရန်၊ အလုပ်နှင့်ဘဝအား ချိန်ခွင်လျှာ ညီမျှစွာ တည်ဆောက်ကြရန် ဟူသော သူ၏ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုသင်ခန်းစာ ၄ ခုကိုဘွဲ့ရမောင်မယ်များအား ဝေမျှပေးခဲ့သည်။မိမိ စွန့်ခွာလာခဲ့ရသော ဇာတိနိုင်ငံသည် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ကန့်သတ်မှုများစွာ ရှိခဲ့၊ ရှိဆဲဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီခြေလှမ်း စတင်နေပြီကို သိရသည့်အကြောင်း
ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဆိုပါ လူချွန်လူမွန်တစ်ဦးအကြောင်း အနည်းငယ် တင်ပြလိုပါသည်။ ဒေါက်တာ ရာဖီအုလ် အဟဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန် ဝိဇ္ဖာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ B.Sc. (Physics) ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာဋ္ဌာနမှ M.Sc. (Computer Science) ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာဋ္ဌာနတွင် systems programmer အဖြစ်သုံးနှစ် လုပ်ကိုင်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်လာပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ် AIT ၏ ပထမဆုံး Computer Applications ဘွဲ့သင်တန်းကို ပညာသင်ဆုနှင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် AIT မှ M.Sc. (Computer Science)
ဘွဲ့ရရှိကာ ပြည့်ဝပညာသင်ဆုနှင့်တစ်ကွ အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရှိ University of Southern California မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Ph.D. program သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရပြန်သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ၎င်းမှ Ph.D. (Computer Science)ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒေါက်တာဘွဲ့ကို အကောင်းဆုံး အဆင့်ဝင်ဖြင့် ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အခြေချပြီး ကွန်ပျူတာရေးရာ ပညာရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
၁၉၈၅ မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ University of Maryland ၏ College of Business and Management ဋ္ဌာနတွင် Information Systems လက်ထောက် ပါမောက္ခအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိHewlett-Packard Corporation, Cupertino, California တွင် Enterprise Objects Program အတွက် ဗိသုကာပညာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ Santa Clara University, Santa Clara, California ၏
ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာဋ္ဌာနတွင် အချိန်ပိုင်းသုတေသီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ California, Redwood Shores မှ Oracle Corporation ၏ Oracle Lite ကုန်ထုတ်ဋ္ဌာနအကြီးတန်းအကြံပေးနှင့် ဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ မှ ယနေ့တိုင် ၎င်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဆော့ဖ်ဝဲမြှင့်တင်ရေးဋ္ဌာန၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်သည်။ Oracle ကော်ပိုရေးရှင်း၏
database နှင့် မိုဘိုင်းလ် ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်ရေးများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၌ ဦးဆောင်အောင်မြင်စေခဲ့သူဖြစ်သည်။ databases, security, mobility နှင့် performance ဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်း များစွာကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သတင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှု ဂုဏ်ထူးများစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ထူးချွန်သော ဂေါက်ရိုက်အားကစား သမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သတင်းနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်၏ သုတေသနနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၌ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် အတွေ့အကြုံရှိနေသဖြင့် ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ ပညာရပ်နှင့် ကွန်ဖရင့်စာတမ်းပေါင်း ၂၀ ကျော် ရေးသားတင်သွင်းခဲ့ပြီးသတင်းနှင့်နည်းပညာအဖြေရှာခြင်း၌ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ၆ မျိုး ချီးမြှင့်ခံရသည့်အပြင် နောက်ထပ် ဆု ၄ မျိုးအတွက်လည်း လျာထားခံရပြီးဖြစ်သည်။ သို့သာမက HP နှင့် Oracle မှ ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်သစ်
၆ မျိုးကိုလည်း အကြမ်းထည်မှ အချောသတ်အဆင့်အထိ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ cloud computing နယ်ပယ်ထိရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးလျက်ရှိသည်။ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးမားဆုံး ကွန်ပျူတာနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏ အကြီးတန်းအမှုဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာသည့် သူ့ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ ဒေါက်တာ အဟဒ်က ထိပ်တန်း အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အတွက် အခြေခံပညာရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးလှကြောင်း ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။
အကယ်၍များ ယခင်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံသားနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားချိုးနှိမ်ဆက်ဆံမှုများ မရှိခဲ့ပါလျှင် ဒေါက်တာ အဟဒ်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မည့် တိုင်းကျိုး ပြည်ပြု လူချွန်လူမွန်တို့အား
ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မည်၊ ၎င်းအပြင် တိုင်းပြည်သည် ကမ္ဘာ့အလယ် ဂုဏ်ထည်စွာ ရပ်တည်နေလိမ့်မည်ဟု လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် သင်ခန်းစာယူအပ်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်ဟုလည်းကောင်း တွေးမိပေသည်။
ဒေါက်တာ အဟဒ် အနေဖြင့် အမိနိုင်ငံကို စွန်ခွာခဲ့ရသည့် နောက်ခံ အကြောင်းတရားနဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း အစုံအလင်ကို အခြေအနေ အခွင့်အရေး ပေးရင်ဖြင့် မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။
← ယောကျာ်း မယူချင်ပေမယ့် ကလေးမွေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သိန်းတသောင်းတန်မြေကွက် ၆ ကွက်ကိုရောင်းပြီးအလှူလုပ် သီလရှင်အပြီးဝတ်တော့မည့် ကမ္ဘာပတ်ဒေါ်တင်တင်စိန် →
အင်းဝစက်ချုပ်ဆိုင်က လက်ဆယ်ချောင်းအချိုးခံရတဲ့ သမီးလေးကို မေတ္တာနဲ့ ကုပေးတဲ့ စေတနာရှင်ဆရာကြီးး လေးစားထိုက်ပါပေတယ်